IINGCEBISO EZI-6 ZOKUZIPHUMELA NGOKWAKHO NGEXESHA LOKUQALA - EKHAYA
Iingcebiso ezi-6 zokuziPhumela ngokwakho ngeXesha lokuQala
Kulula ukuzisonga ngovuyo lokuphuma ngokwakho okokuqala. Mhlawumbi usiya kwikholeji, okanye ekugqibeleni usiya ngaphaya kobomi be-dorm kwaye uphume uye kwilizwe lokwenyani- iiflethi! Qeshisa! Abanini mhlaba! Amatyala ombane! Ngokukhawuleza uvuyo luba luloyiko. Njani i-heck ekufanele ukuba uziphathe zonke ezo nkcukacha?! MAMA! TATA! NCEDA! Ngaphambi kokuba ubuyele egumbini lakho lokulala endlwini yabazali bakho (ungaphaya kwala maphepha e-Ninja Turtles, awucingi?), Funda ezi ngcebiso ze-6 zokuzihambela ngokwakho okokuqala. Ngokujolisa kancinci kwaye amaqhinga ambalwa alula, ayizukubonakala iyothusa.
1. Gcina imali kwibhedi elungileyo
Kunokuba sisilingo ukukhawuleza ukuthenga izinto zefanitshala xa unxibisa indawo yakho yokuqala, kodwa nokuba uthengela yonke into esezandleni okanye ngexabiso eliphantsi, kuya kufuneka uthenge umatrasi olungileyo. Ukuba awulali kakuhle, bonke ubomi bakho buya kusokola. Akukho nto ikwenza uzive umdala, unomsindo, kwaye ungonwabanga ngobomi bakho obutsha ngaphandle kweentlungu zangasemva kunye nokudinwa okungapheliyo. Ngaphandle kokuba uzimisele ukuchitha ixesha uzingela kwiivenkile zefanitshala zasekhaya, kunokwenzeka ukuba ufumane ezona zivumelwano zibalaseleyo kwi-Intanethi. IAmazon.com, umzekelo, inee-mega ezijongana noomatrasi abakumgangatho ophezulu abangaphantsi kwe- $ 300 - kwaye ukuba ufuna ukuhamba neMemori Foam, iyakubonisa i-vacuum epakishwe kwibhokisi esemnyango wakho. Umsebenzi wakho kuphela? Zakhele iqonga , Iprojekthi ye-DIY enokwenziwa ngexabiso eliphantsi.Intengiso
2. Vumela omnye umntu aphakamise ubunzima
Ukuhambisa abantu abahambahambayo kunokubonakala ngathi lukhetho olubi, kodwa awuyi kuzisola. Unako ukukhathazeka malunga nokuhamba kwakho ngaphandle kokufumanisa ukuba ungayifumana njani isofa kwizinyuko okanye uxinzelele umqolo wakho ngeebhokisi ezinzima. Iqela elifanelekileyo elifanelekileyo liya kwenza ukuba ukuhamba kwakho kukhawuleze, kube lula, kwaye kungabi nazintlungu- ubuncinci, de ube uyaqonda ukuba ungazibeka phi na ezo knick knacks uthathe isigqibo sokuhamba nazo. Qiniseka ukuba uqesha abo bashukumayo abanobuchule, i-inshurensi, kunye namava, kwaye bafunda uphononongo lwabo kwindawo yomntu wesithathu ngaphambi kokunikezela ngemali yakho! Sebenzisa izixhobo ezikwi-Intanethi yindlela elungileyo yokulungiselela ukuhamba kwakho, kuba iya konga ixesha kunye nemali, kwaye ikuncede uhlale ulungelelene. Thelekisa ixabiso kunye nezixhobo zokubhukisha yenza ukufumana kunye nokubhukisha indawo eshukumayo kube lula kakhulu. Unokufumana ulwazi malunga nokuhambisa kwindawo yakho, konke endaweni enye, kwaye wenze imibuzo ngqo eqongeni - akukho sidingo sokwenza iifowuni ezingapheliyo. Uninzi lwezi zixhobo zihambayo kwi-intanethi zikuvumela ukuba ubone uphononongo lokwenyani oluvela kubathengi bangaphambili, nabo.
Ungazikopa njani iividiyo ukusuka kwi-iphone ukuya kwi-pc
3. Funda ukupheka izinto ezilula, ezisempilweni
Enye yeenkcitho zaseMelika zichitha imali eninzi ekutyeni. Ukutya okwenziwe kwangaphambili, ukuthatha ukutya, kunye nee-pizza eziqingqiweyo zibiza imali eninzi kunendlela yokulungiselela ukutya okulula, kwaye zihlala zizele zizigcinisi okanye ezinye izithako ezingachazekiyo ongafuniyo ukuzibeka emzimbeni wakho. Qala ngokwazi ivenkile yakho yendawo yokutya - kwaye unamathele kumda omkhulu kangangoko. Kulapho uzakufumana ukutya kweyona fom yendalo. Yenza ubuhlobo neCandelo le-Bulk, apho unokufumana khona irayisi eninzi, i-oats, kunye nokunye ukutya okuqhelekileyo ngamaxabiso asezantsi.Intengiso
Zininzi iiblogi ezimangalisayo ngaphandle apho kunye nobuninzi beendlela zokupheka, zonke ezinokukhutshelwa simahla. ThugKitchen.com ihambisa ukutya okucocekileyo kunye ne-mega sass kunye ne-humor (cacisa ukuba amagama athukayo ayakukhathaza!). Ungajonga kwakhona i-Allrecipes.com kunye nenethiwekhi yokutya ukulungiselela iiresiphi ezilula, ezikhawulezayo nezisempilweni. Khetha iiresiphi ezimbalwa ezinomtsalane kuwe, kwaye uzibambe kakuhle ngaphambi kokuba ukhathazeke ngokuba loluphi na uhlobo lwabapheki abakumgangatho wehlabathi.
4. Biza izixhobo zokucoca ezintle
Zonke ezo bhotile zahlukeneyo zokutshiza zokucoca iinkuni, i-porcelain kunye neglasi yinkcitho yemali, kwaye igcwele iikhemikhali kunye neziqholo zokwenziwa. Unokwenza izitya zakho zokucoca ngemali encinci kwaye ngaphandle kweekhemikhali ngezinto ezimbalwa ezilula: iviniga emhlophe, isoda yokubhaka, kunye nesepha ye-castile. Ngaba ufuna ukukhangela ibhafu yakho? Hlanganisa isepha ye-castile kunye nesoda yokubhaka kwaye uhlikihle ukungcola. Umxube we-50/50 weviniga kunye namanzi, osulwe ngelaphu le-microfiber, uya kuzisusa iiminerali kwiindawo zokuntywila, imijelo evela kwizipili, kwaye ucoce iifestile zakho. Thela isoda kwibhokisi yangasese ukunxiba isitya, emva koko ufefe iviniga kwaye uhlikihle ibrashi yakho yangasese. Kwaye ukuba unamabala alukhuni ngokwenene, iBorax yipowder yendalo kodwa esebenzayo ungongeza kumxube wakho wesoda-castile yesepha.Intengiso
5. Susa izixhobo ukonga umbane
Kukho le nto ibizwa ngokuba yiPhantom Load - umzobo wamandla owenzekayo xa i-elektroniki yakho ifakwe, kodwa hayi. Oko kuthetha ukuba isilinganisi-manzi sisaqhubeka, sihlasela ityala lakho, nangona wawucinga ukuba ulungile ngokucima yonke into. Ukuba ungathanda ukugcina ityala lombane lisezantsi, vula izixhobo zakho zombane xa ungazisebenzisi. Yenza oku kube lula ngokufaka izinto kumtya wokukhuphela / ukukhusela isikhuseli esinokucima / ukucima umbane ukuze ubulale umbane kwinkqubo yakho yolonwabo, umzekelo, ngeflick enye yokutshintsha.
I-tilapia isondla ezantsi
6. Yenza uhlahlo-lwabiwo mali onokululandela
Ngobuchwephesha obukhoyo kwezi ntsuku, ngenene akunzima kangako ukufumana umfanekiso wendlela ochitha ngayo imali kunye nokwenza uhlahlo-lwabiwo mali oluza kukunceda uhlale endleleni. Unokwenza oku ngokwakho usebenzisa iphepha le-Excel, okanye unokukhetha ukusebenzisa usetyenziso lweselfowuni. I-Mint.com yenye yeenkqubo ezinokuthi, unyaka nonyaka, zisebenzise ii-accolades ngokulula ukuzisebenzisa kwaye zisimahla-Ikhonkco kwi-akhawunti yakho yebhanki kunye nekhadi lokuthenga ngetyala ukungenisa ngaphandle komthungo konke okuthengileyo kunye nenkcitho. Inkqubo ihlela yonke into ngokusemandleni ayo, kodwa ungayicwangcisa ngokulula ukwahlula iindawo ezithile okanye ukuthengwa phantsi kweendidi ezithile zohlahlo-lwabiwo mali. Ukusuka apho, unokulandelela inkcitho yakho ngokodidi okanye ngokubanzi, usete iinjongo zokonga, kwaye ufumane izilumkiso ukuba usondela kumda wohlahlo-lwabiwo mali. Ngesi sixhobo sisebenzayo epokothweni yakho, akukho gumbi lokudrafti ngaphezulu okanye lokulahleka kwentlawulo yerenti! Zininzi ii -apps zohlahlo-lwabiwo mali phaya, nditsho nophando lwakho, kwaye ukhethe okulungeleyo. Ukuzihambela ngokwakho okokuqala kuyinto enkulu ebomini bakho. Ngezi hacks zilula kunye neengcebiso, ayizukuba linyathelo elilandelayo kuphela, kodwa ziya kukunceda uvule indlela yokuphumelela kwixa elizayo kubomi bakho abadala, kwiminyaka ezayo.Intengiso
Ezona ncwadi zilungileyo zokuzifumana
andazi ukuba ndenza ntoni
Ngaba i-matcha powder ine-caffeine
ukuzilolonga kwabasaqalayo ukumila
indlela yokwenza umfazi ongakhuselekanga azive ekhuselekile
Kuchaphulo Olu Inkuthazo Intsingiselo Yobomi Amandla Engqondo Ubomi Obunokubakho